Manchester City Iyo Bayern Munich oo uloolamaya Marco Reus | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Manchester City Iyo Bayern Munich oo uloolamaya Marco Reus
Manchester City ayaa dagaalkii u danbeeyey la geleysa kooxda Bayern Munich kaasi oo ku saabsan sidii xili ciyaareedka danbe loo soo qaadan lahaa xidiga ku qiimeysan £20million-ee garabka ugu dheela xulka Germany Marco Reus.
wallow kooxda Borussia Dortmund ay sheegtay in xidigeeda aysan iibin doonin marka uu furmo daaqada iibka bisha January ,iyagoo ku qal qaalinaya inuu hesiiska u dheereeyo,maadaama marka uu dhamaado xili ciyaareedka danbe uu xidigi dalban karo kooxdii uu doono.
Reus oo 25-sano jir ah,ayaa ku guda jira heshiiskiisa kooxda oo ku eg ilaa 2017,laakiin hadii uu kamaago inuu dheereyo xagaaga waxay kooxda Dortmund madaxiisa dul dhigeysaa aduun dhan 25million euros kooxdii dooneysa ay ku heli karto.
kooxda heeysata Bundesliga ee Bayern ayaa dhankeeda aaminsan in kooxda magaalada Manchester ee City kaga imaanayo tartan xoogan,iyadoo tababare Manuel Pellegrini uu doonaayo inuu xidigaan u sheego mushaar aad u badan oo dhan todobaadkii £200,000.
Liverpool iyo Manchester United ayaa sidoo kale lala xiriiriyay iney doonayaan Reus,kaasoo 23 kulan u saftay xulkiisa,laakiin City oo la ogyahay xaaladeeda Barclays Premier League ayaa dooneysa iney wii wado sxbtinimada iyo xiriirka wiilkaasi garabka uga dheela Dortmund.